တစ်ကယ့်အဖြစ်ပျက်လေးပါ ဖာခေါင်းများသို့ပေးစာ - Achawlaymyar
ယခုခေတ် လူငယ် ကျား/မ မရွေး ပြီးဆုံးအောင်ဖတ်ပေးကြ​စေလိုပါတယ်​​နော်​.
a´ ” ဟျောင့် ငါ့စော်ဆီကအဖြေရပြီကွ “b´ ” ဟုတ်လား ” Congrats သားကြီးတစ်ဝိုင်းတော့လုပ်လိုက်တော့
b ဟျောင့် မင်းစော်နဲ့ ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲ ” ပြောစမ်းပါဦး ”
a ဒီလိုပါပဲကွာ ” အဆင်ပြေပါတယ် ”
b ငါမေးတာက ဟိုဟာဒီဟာလုပ်ပြီးပြီလား
a ” ဟာ ” မဖြစ်ရသေးပါဘူးကွာဒီတိုင်း ရိုးရိုးသားသားပဲချစ်ကြတာပါကွ
b မင်းကလဲ ညံ့လိုက်တာကွာ,,,ဒီခေတ်က ကိုယ်မစားရင် ” သူများစားတဲ့ခေတ်ကွ ”
a ” ဟင် ” ဟျောင့် ဘာဆိုင်လို့လဲကွ
b ” အေးမှတ်ထား “ဒီခေတ်က အပျိုရှားသွားပီကိုယ်မလုပ်လဲ ကိုယ်နဲ့ပြတ်ရင်လဲနောက်တစ်ကောင်နဲ့ ဖြစ်မှာပဲ,,,ငါဆို ငါ့စော်နဲ့ဖြစ်ပီးလို့,,,ပြတ်ပါပြတ်သွားပီ မင်းကတော့ညံ့ချက်ပဲကွာ
a ” ဟင် ”
b အေးမှတ်ထား ဒီခေတ်ကကိုယ်က ပါကင်မဖောက်လဲတစ်ခြားကောင်က ဖောက်မှာပဲကိုယ့်ရှေ့မှာတောင် ဘယ်နှစ်ကောင်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြီလဲ မသိနိုင်တဲ့ခေတ်ကွ…စော်ရရင် အပျိုစစ်ပါစေထက်အကြိမ်ရေနည်းပါစေ ဆုတောင်းနေရတဲ့ခေတ်ကွ “သားကြီးရ ”
a အေးသားကြီး ” ငါတစ်ခုပြောမယ် “မင်းအမနှမ မင်းအမျိုးထဲကမိန်းမသားတယောက် တစ်ခြားကောင်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပီးအဲ့ကောင်က ဖြတ်သွားရင် မင်းဘယ်လိုနေမလဲ
b ” ဟာကြာ “အဲ့ကောင်ကို တွေ့တဲ့နေရာ” အသေပဲ… ”
a မင်းအမေက မင်းအဖေနဲ့ မညားခင်မင်းကိုမမွေးခင် တစ်ခြားမင်းအဖေအရွယ်ယောကျာ်းတစ်ယောက်နဲ့ အပျိုစင်ဘဝကိုအကြိမ်ကြိမ်ပျက်ခဲ့ပီးမှ မင်းအဖေနဲ့ညားသွားတယ်ဆိုရင်ရော…
b ဟေ့ကောင် မင်းတော်တော့,,,ငါ့အမေက ရိုးသားတယ်,,,အဲ့လို မိန်းမမျိုး မဟုတ်ဘူး ,,,ဆက်ပြောရင် ငါထထိုးမှာနော်…
a ” အေး ” မှတ်ထားကွမင်းတို့လို ကောင်မျိုးတွေကြောင့်ပဲ,,,အဲ့ဒီလို ရိုးသားတဲ့ မိန်းမတွေပဲ,,,အပျိုရည်ပျက်ရတာ,,,မင်းတို့လို ကောင်မျိုးတွေကြောင့်ပဲ အပျိုတွေရှားလာတာနှမ အမမရှိလို့ ကိုယ်ချင်းမစာနာတတ်ရင်တောင်,,,အမေရှိတယ် မင်းအမေသာအရင်ကအဲ့လို,,,ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆို မင်းဘယ်လိုခံစားရမလဲ …
b ဒါတော့ အမေလေကွာ” မတူဘူး ”
a´ အေး မင်းလုပ်ခဲ့ပီးပြတ်ခဲ့တဲ့,,မင်းစော်တွေကလဲ နောင်တချိန်မှာ,,,မင်းအမေလို မိခင်ဖြစ်လာမယ့်သူတွေပဲ…”
b´ ဟာကွာ “မင်းတော်လိုက်တော့…
a ဖာသည်တောင် ငွေပေးမှ အိပ်လို့ရတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေး ခေတ်မှာ,,,မင်းကို ယုံကြည်တာ တစ်ခုထဲနဲ့ ,,,မင်းနဲ့ အိပ်ခဲ့တဲ့စော်ကို မင်းကဖြတ်တယ်,,,ဆိုတော့ မင်းဟာ ဂွေးပါပီးခေါင်းမပါတဲ့ ယောကျာင်္းပဲသားကြီး….
မှတ်ထား ဘယ်မိန်းမမှ,,,ကျွန်မကိုလုပ်ပါဆိုပီး မချစ်ပဲနဲ့ထမိန် မလှန်ပေးဘူးလေ…ယုံကြည်လို့ အားကိုးလို့ ချစ်လို့,,,လိုက်လျောပေးခဲ့တာကို,,,မင်းတို့လို ကောင်တွေကတော်လှပီထင်နေရင်မင်းတို့ဟာ ခွေးထက်မိုက်တဲ့….ယောကျာင်္းတွေပဲ
အမျိုး​ကောင်းသား အမျိုး​ကောင်းသ္မီးများမိမိကိုယ်​ကို​ရော တစ်​ဦးကို တစ်​ဦး​ရောကိုယ်​ချင်းစာတရား ​ရှေ့မှာထားပီးအသိတရား သတိတရားများဖြင့်​အစဉ်​ထာဝရ​စောင့်​​ရှောက်​နိုင်​ကြပါ​စေလို့ ဆန္ဒပြု မိ​နေပါ​တော့သည်​..
Like မလုပ်ချင်နေပါ share ပေးကြပါရန် အနူးညွန့်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ယခုခောတ် လူငယ်တွေရဲ့100%မှာ90% ထက်မက အရမ်း ကို ပျက်စီးနေကြပြီမို့ပါ ‘
ယခုခတျေ လူငယျ ကြား/မ မရှေး ပွီးဆုံးအောငျဖတျပေးကွ​စလေိုပါတယျ​​နျော​.
a´ ” ဟြောငျ့ ငါ့စျောဆီကအဖွရေပွီကှ “#b´ ” ဟုတျလား ” Congrats သားကွီးတဈဝိုငျးတော့လုပျလိုကျတော့
b ဟြောငျ့ မငျးစျောနဲ့ ဘယျအခွအေနရေောကျနပွေီလဲ ” ပွောစမျးပါဦး ”
a ဒီလိုပါပဲကှာ ” အဆငျပွပေါတယျ ”
b ငါမေးတာက ဟိုဟာဒီဟာလုပျပွီးပွီလား
a ” ဟာ ” မဖွဈရသေးပါဘူးကှာဒီတိုငျး ရိုးရိုးသားသားပဲခဈြကွတာပါကှ
b မငျးကလဲ ညံ့လိုကျတာကှာ,,,ဒီခတျေက ကိုယျမစားရငျ ” သူမြားစားတဲ့ခတျေကှ ”
a ” ဟငျ ” ဟြောငျ့ ဘာဆိုငျလို့လဲကှ…
b ” အေးမှတျထား “ဒီခတျေက အပြိုရှားသှားပီကိုယျမလုပျလဲ ကိုယျနဲ့ပွတျရငျလဲနောကျတဈကောငျနဲ့ ဖွဈမှာပဲ,,,ငါဆို ငါ့စျောနဲ့ဖွဈပီးလို့,,,ပွတျပါပွတျသှားပီ မငျးကတော့ညံ့ခကျြပဲကှာ
a ” ဟငျ ”
b အေးမှတျထား ဒီခတျေကကိုယျက ပါကငျမဖောကျလဲတဈခွားကောငျက ဖောကျမှာပဲကိုယျ့ရှေ့မှာတောငျ ဘယျနှဈကောငျနဲ့ဖွဈပွီးပွီလဲ မသိနိုငျတဲ့ခတျေကှ…စျောရရငျ အပြိုစဈပါစထေကျအကွိမျရနေညျးပါစေ ဆုတောငျးနရေတဲ့ခတျေကှ “သားကွီးရ ”
a အေးသားကွီး ” ငါတဈခုပွောမယျ “မငျးအမနှမ မငျးအမြိုးထဲကမိနျးမသားတယောကျ တဈခွားကောငျနဲ့အဲ့လိုဖွဈပီးအဲ့ကောငျက ဖွတျသှားရငျ မငျးဘယျလိုနမေလဲ…
b ” ဟာကွာ “အဲ့ကောငျကို တှတေဲ့နရော” အသပေဲ… ”
a မငျးအမကေ မငျးအဖနေဲ့ မညားခငျမငျးကိုမမှေးခငျ တဈခွားမငျးအဖအေရှယျယောကျြားတဈယောကျနဲ့ အပြိုစငျဘဝကိုအကွိမျကွိမျပကျြခဲ့ပီးမှ မငျးအဖနေဲ့ညားသှားတယျဆိုရငျရော…
b ဟကေ့ောငျ မငျးတျောတော့,,,ငါ့အမကေ ရိုးသားတယျ,,,အဲ့လို မိနျးမမြိုး မဟုတျဘူး ,,,ဆကျပွောရငျ ငါထထိုးမှာနျော…
a ” အေး ” မှတျထားကှမငျးတို့လို ကောငျမြိုးတှကွေောငျ့ပဲ,,,အဲ့ဒီလို ရိုးသားတဲ့ မိနျးမတှပေဲ,,,အပြိုရညျပကျြရတာ,,,မငျးတို့လို ကောငျမြိုးတှကွေောငျ့ပဲ အပြိုတှရှေားလာတာနှမ အမမရှိလို့ ကိုယျခငျြးမစာနာတတျရငျတောငျ,,,အမရှေိတယျ မငျးအမသောအရငျကအဲ့လို,,,ဖွဈခဲ့တယျဆို မငျးဘယျလိုခံစားရမလဲ …
b ဒါတော့ အမလေကှော” မတူဘူး ”
a´ အေး မငျးလုပျခဲ့ပီးပွတျခဲ့တဲ့,,မငျးစျောတှကေလဲ နောငျတခြိနျမှာ,,,မငျးအမလေို မိခငျဖွဈလာမယျ့သူတှပေဲ…”
b´ ဟာကှာ “မငျးတျောလိုကျတော့
a ဖာသညျတောငျ ငှပေေးမှ အိပျလို့ရတဲ့စြေးကှကျစီးပှားရေး ခတျေမှာ,,,မငျးကို ယုံကွညျတာ တဈခုထဲနဲ့ ,,,မငျးနဲ့ အိပျခဲ့တဲ့စျောကို မငျးကဖွတျတယျ,,,ဆိုတော့ မငျးဟာ ဂှေးပါပီးခေါငျးမပါတဲ့ ယောကြာင်ျးပဲသားကွီး….
မှတျထား ဘယျမိနျးမမှ,,,ကြှနျမကိုလုပျပါဆိုပီး မခဈြပဲနဲ့ထမိနျ မလှနျပေးဘူးလေ…ယုံကွညျလို့ အားကိုးလို့ ခဈြလို့,,,လိုကျလြောပေးခဲ့တာကို,,,မငျးတို့လို ကောငျတှကေတျောလှပီထငျနရေငျမငျးတို့ဟာ ခှေးထကျမိုကျတဲ့….ယောကြာင်ျးတှပေဲ…
အမြိုး​ကောငျးသား အမြိုး​ကောငျးသ်မီးမြားမိမိကိုယျ​ကို​ရော တဈ​ဦးကို တဈ​ဦး​ရောကိုယျ​ခငျြးစာတရား ​ရှမှေ့ာထားပီးအသိတရား သတိတရားမြားဖွငျ့​အစဉျ​ထာဝရ​စောငျ့​​ရှောကျ​နိုငျ​ကွပါ​စလေို့ ဆန်ဒပွု မိ​နပေါ​တော့သညျ​..
Like မလုပျခငျြနပေါ share ပေးကွပါရနျ အနူးညှနျ့တောငျးဆိုအပျပါတယျယခုခောတျ လူငယျတှရေဲ့100%မှာ90% ထကျမက အရမျး ကို ပကျြစီးနကွေပွီမို့ပါ ‘